ဒီစာစုလေးကတော့ကျမတို့ရဲ့အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ခင်မင်ရာဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲက လူပျိုကြီး အပျိုကြီးတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကို စစ်တမ်းကောက်ထားပြီး ထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလဒ်တွေကို ပြန်လည်ရေး သားထားတာပါ….. အိမ်ထောင်ရှင်များနှင့် အိမ်ထောင်ပြုရန်ရည်ရွယ်ထားသူများ အနေနဲ့ဒီ စာကိုဖတ်ဖို့ မတိုက်တွန်းလိုပါ……
လက်ရှိလူပျိုကြီး အပျိုကြီးများနှင့် လူပျိုကြီး အပျိုကြီးလုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်သူများသာဒီစာကို ဖတ်ရှုစေလိုပါသည်။
လူတွေက လူပျိုကြီး အပျိုကြီးဆိုတာနဲ့ စချင်နောက်ချင်ကြတယ် သူများအပူကိုယ့်အပူလုပ်ပြီး ၀င်စွက်ဖက်
လေ့ရှိကြပါတယ်။ ရယ်စရာလူသားအဖြစ်သတ်မှတ်ကြတယ်……ထိုအခါ ယခင်အေးချမ်းနေတဲ့ဘ၀မှ ပူပင်သောက များလှစွာသော အိမ်ထောင်သည်ဘ၀သို့ ကူးပြောင်းသွားပြီး ဒုက္ခရောက်ကြရသော လူပျိုကြီး အပျိုကြီးများစွာကိုတွေ့နေရသည်….။
.လူပျိုကြီး အပျိုကြီးဖြစ်တာရှက်စရာမဟုတ်ပါ..ဂုဏ်ယူတတ်မယ်ဆိုရင် ဂုဏ်ယူစရာတွေမှတစ်ပုံ
ရှိနေလို့ အိမ်ထောင်မပြုပဲ တမင်နေသူကိုမှ လူပျို လို့ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးပါ………
လူတွေကဇိမ်ကျကျနေရရင် နတ်စည်းစိမ်ခံရတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်သောဆန္ဒနဲ့အညီ လူပျိုကြီး အပျိုကြီးဖြစ်လာသူတိုင်းက နတ်စည်းစိမ်ကိုခံစားနေရသူတွေလို့ပြောရင် မလွန်ဘူးထင်ပါတယ်….
အားလုံးကတိုးတက်လာတဲ့လူနေမှုပုံစံအတိုင်း ပြေးလွှားရုန်းကန်နေရတဲ့ကာလမှာ လူပျိုကြီး အပျိုကြီးတို့က
ခြေဆုံးခေါင်းဆုံး သနပ်ခါးလိမ်းနိုင်တုန်း၊ နူတ်ခမ်းမွှေးကို မရိတ်ပဲ ဇာဂနာနဲ့တုန်းပါ။(အချိန်တွေ ပိုနေတာကိုး..ဟုတ်တယ်ဟုတ်)
အလုပ်ကိုအပြေးအလွှားလုပ်ပြီး အိမ်ပြန်ရောက်ရင် ညစာချက်ရတဲ့ အိမ်ရှင်မနဲ့တော့ ကွာချင်တိုင်း ကွာနေတာပါပဲ။
ကိစ္စတိုင်းမှာ အားနည်းချက် အားသာချက်ရှိတာပါပဲ အားနည်းချက်ကိုအသာထားလို့ အားသာချက်ဘာတွေရှိလဲ ရှာကြည့်ရအောင်….ဒီအကြောင်းအရာတွေက လူပျိုကြီး အပျိုကြီးတိုင်းရဲ့အားသာချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာကြည့်ပါ………
ကိုယ်ကဘယ်သူ့အတွက်မှတာဝန်ယူစရာမလိုပါဘူး။ ရာသီဥတုပူလို့ ညဆိုရင် ကလေးကို ယောက်ျားကိုယပ်တောင်ခတ်ပေးနေစရာမလိုပါဘူး….ခရီးထွက်ဖို့ဘယ်သူ့ကိုမှခွင့်တောင်းနေစရာမလို
ကိုယ်အိပ်ချင်အိပ်မယ် ကိုယ်စားချင်စားမယ် ကိုယ်သွားချင်သွားမယ်။နယ်မှာတာဝန်ကျလို့လည်းဝမ်းနည်းစရာမလိုဘူး။ အိမ်ပြန်နောက်ကျလို့လည်းဘာပြဿနာမှတဘူး………သူများစိတ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လို မလုပ်ချင်လည်းလုပ် မသွားချင်လည်းသွားဖြစ်စရာမလိုဘူး…အေးဆေးတယ် လွတ်လပ်တယ်။
ဘာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ရုံပဲ။ အိမ်ပြန်ပြီးတိုင်ပင်တာတွေ ညှိနှိုင်းတာတွေလုပ်စရာမလိုဘူး။
ကိုယ်လုပ်ချင်ရဲ့သားနဲ့ ကိုယ်သွားချင်ရဲ့သားနဲ့ ကိုယ်စားချင်ရဲ့သားနဲ့ညှိနှိုင်းလို့မရလို့ မလုပ်လိုက်ရတာမျိုးမရှိဘူး …အိမ်ထောင်ဖက်မျက်နှာမငယ်ရအောင်သူ့အမျိုးတွေကို အားအားယားယားမျက်နှာချိုသွေးပြနေစရာမလိုဘူး ။ ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ အိပ်ချင်အိပ်မယ် စားချင်စားမယ် နေ့တိုင်းဝယ်စားချင်လည်စားမယ်။ အချဉ်တွေ အငန်တွေချည်းချက်ချင်လည်းချက်မယ်။ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအိမ်ကို တစ်နေကုန်လည်ချင်လည်မယ်
သားတွဲလဲ၊ သမီးတွဲလဲနဲ့သွားချင်တာမသွားရတာ စားချင်တာမစားရတဲ့ဒုက္ခငြိမ်းတယ်..ဘယ်သူ့ကိုမှငဲ့ညှာစရာမလိုပဲလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကြိုးစားခွင့်ရှိမယ်…..
နောက်ဆံငင်စရာမလိုဘူး ။ အလုပ်ကိုနေ့နဲ့ညဆက်လုပ်နေဖြစ်လည်းဘယ်သူ့ကိုမှအားနာစရာမလိုဘူး …….
ဘာအနှောင်အဖွဲ့မှမရှိလို့ လွတ်လပ်မှုကိုအပြည့်အ၀ခံစားရတယ် … စိတ်ထဲရှိရင်ရှိသလို ထလုပ်နိုင်တယ် ဘယ်သူ့သြဇာမှခံစရာမလိုပါ…
၄။ ပိုမိုနုနယ်လှပခြင်း၊ အရွယ်တင်ခြင်း
လူပျိုကြီး အပျိုကြီးတွေဟာ အိမ်ထောင်သည်လောက်အပူမရှိဘူး.. လင်ပူမိတာ သားပူမိတာမရှိဘူး……ဗာဟီရကိစ္စနည်းလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိုပြီးဂရုစိုက်နိုင်ပါသည်။ ၀၀လင်လင်အိပ်စက်ရတာ၊ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်စားသောက်ရတာ၊ နုပျိုလှပအောင်ပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရတာ၊ စိတ်ညစ်စရာနည်းတာ၊
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေရတာ၊ တာဝန်ယူစရာကြီးကြီးမားမားမရှိတာ၊ စိတ်လွတ်လပ်မှုရှိတာတွေဟာ
လူပျိုကြီး အပျိုကြီးတို့ရဲ့ နုပျိုခြင်း ကြောင်းရင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်
အပျိုကြီး၊ လူပျိုကြီးတွေဟာ ကျန်းမားရေးကောင်းကြပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုနည်းခြင်း၊ လွတ်လပ်မှုရှိခြင်း၊
စိတ်တိုင်းကျနေရခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအတွက်လမ်းလျှောက်ခြင်းကအစ ကိုယ်ပိုင်အချိန် အပြည့်အ၀ရရှိခြင်းတွေဟာ ကျန်းမာခြင်းရဲ့အားသာချက်တွေပါ။
အိမ်ထောင်သည်တွေကသားစာမို့ မယားစာမို့ မစားရက်မသောက်ရက်ရှိနေမယ့်အချိန်မှာ သူ့ဗိုက်သူဝအောင်ဖြည့်ခွင့်ရတဲ့လူပျိုကြီး အပျိုကြီးတွေကတော့ အဟာရအပြည့်အ၀ရပါတယ်။ ဆေးမြီးတိုနဲ့အိမ်ရှင်မတွေဆေးကုနေချိန်မှာ
၈နာရီအလုပ်လုပ်ရင်လူလွတ်တွေက၁၀နာရီလည်းအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အလုပ်ထဲမှာစိတ်နှစ်ပြီးလုပ်နိုင်သလို နယ်ကို
ဆိုရင်လည်းထသွားထလာသွားလိုက်တာပဲ။အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းပိုပါတယ်…တခြားစိတ်ဝင်စားစရာမရှိလို့ အလုပ်ကိုစိတ်ရော ကိုယ်ပါကြိုးစားတယ်…. ဒါကြောင့်အလုပ်ခေါ်ရင်တောင် အိမ်ထောင်မရှိသူ လူလွတ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးကြေငြာပြီးခေါ်တာပါပဲ
အိမ်ထောင်သည်တွေကတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်မှီခိုအားကိုးလေ့ရှိကြပါတယ်။ အပျိုကြီး လူပျိုကြီးတို့ကတော့ မျှဝေစရာလူမလိုပါဘူး။ ကိုယ့်အားကိုကိုးပြီးကြိုးစားကြပါတယ် ကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းကောင်းကျိုးကိုကိုယ်ပဲခံစား
ရမှာဖြစ်သလို ဆိုးတာလုပ်ရင်လည်းကိုယ်ပဲခံစားရမယ် ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းနားလည်လို့ အတတ်နိုင်ဆုံးကိုယ့်အားကိုကိုးပြီးကြိုးစားလေ့ရှိပါတယ်…..ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတဲ့နေရာမှာ အိမ်ထောင်သည်ထက်ပိုပါတယ် ကိုယ်ထူကိုယ်ထသမားတွေပါ။။။
အပျိုကြီး၊လူပျိုကြီးတွေမှာကိုယ်ပိုင်အချိန် ခပ်များများရတဲ့အတွက် ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ကိစ္စတွေကို တစိုက်မတ်မတ်
ပိုပြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်….အထူးသဖြင့် ဥပုသ်ရက်ရှည်စောင့်တာ တရားများများထိုင်တာ ပုတီးများများစိတ်တာအားလုံးကို
အချိန်ယူဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့်သာသနာပြုတဲ့ကိစ္စမှာ လူရောစိတ်ပါမြှုပ်ပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် အိမ်ထောင်သည်တွေလိုငဲ့ညှာစရာမရှိပါဘူး။……
အိမ်ထောင်သည်တွေကိုအကူအညီတစ်ခုတောင်းကြည့်ပါ။ အိမ်ပြန်ပြီးတိုင်ပင်လိုက်အုံးမယ်ပြောတာနဲ့ ကြုံပါမယ်/ လူပျိုကြီး အပျိုကြီးတွေကတော့စက္ကန့်မဆိုင်းကူညီပါလိမ့်မယ်၊ ဒါကြောင့်လည်းအများစုက တစ်ခုခုအကူအညီလိုရင် အပျိုကြီး လူပျိုကြီးတွေကိုပဲအားကိုးကြပါတယ်၊ ဒါဟာ ပါရမီဖြည့်ပေး နိုင်စွမ်းမြှင့်တာကိုဖော်ပြတာပါ
အများသူငါရဲ့ အားကိုးမှုကိုအခံရဆုံးက လူပျိုကြီး အပျိုကြီးတွေပါ………..
ဒါကကိုယ်တိုင်ကျေကျေနပ်နပ်နဲ့ လူပျိုကြီးအပျိုကြီးဘ၀မှာ ရပ်တည်နေသူတို့ရဲ့ အားသာချက်ပါပဲ
လူပျိုကြီး အပျိုကြီးဘ၀နဲ့အများအကျိုးကိုဆောင်ရွက်သွားတဲ့ ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြပါတယ်…
မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် သမိုင်းပညာရှင် ဆရာမကြီး ဒေါ်ကြန်၊ ပါရဂူ ရှန်တိနိကေတန် စာကြည့်တိုက်ပိုင်ရှင်
ဆရာပါရဂူ တို့က ထင်ရှားသောအောင်မြင်သော အများအကျိုးဆောင်နိုင်သော လူပျိုကြီးအပျိုကြီးများဖြစ်ကြပါတယ်
မာသာထရီဇာကလည်း လူမှုရေးကဏ္ဍမှာထင်ရှားသူတစ်ယောက်ပါ။ သူမကအပျိုကြီးဖြစ်ပါတယ်…..
ယောနိသောမနသိကာရ ဆိုသလို သင့်တင့်မျှတအောင်နှလုံးသွင်းရင် ကျေနပ်စရာကောင်းပါတယ်
လို့ပြောရင်း ဖေ့ ဘုတ်စာမျက်နှာပေါ်မှ လူပျိုကြီး အပျိုကြီးများကို
ဤစာဖြင့် ဂုဏ်ပြုရေးသား အားပေးလိုက်ရပါသည်…………….။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 5/01/2015 02:54:00 AM